यति सानि राम्रि नानिलाई यस्तरी बाधेर राख्छिन आमा ,आखिर किन ? (भिडियो हेर्नुस् ) – Gorkhali Dainik
March 16, 2021 580
हेर्दा अरु बच्चा जस्तो नै देखिन्छन् चितवन रतुवानगर १६ कि चार बर्षिय रेनिसा थापा ।हेर्दा एकदमै राम्रि देखिन्छिन रेनिसा तर बिडम्बना त यो होकि उनको हात चौबिसै घन्टा बाधेर नै राख्नुपर्छ जन्मिदा ठिकठाक नै जन्मिएकि रेनिसा लाई पछि एकाएक के भयो त यस्तो ? उनको हात यश का’रणले बाधिएको रहेछ कि – खुल्ला हुदा उनका हातहरु सिधै मुखमा पुग्दा रहेछन्
र दातले हातको छाला साथै मासुलाई टोक्दिरहिछिन् जस्ले गर्दा हातको मासुनै खिएको रहेछ , छालाहरु पकपक उक्किएको रहेछ ।वास्तविक रोग के लागेको हो पत्तै भएन आ र्थिक अ’वस्था कमजोर भएकै का’रण उपचार पाएकि रहिनछन् रेनिसाले ।कठै बिचरा ,आजको यश शृङ्खलामा तिनै रेनिसा र उनको ममिसग लिइएको अन्तर्बाता पेश गर्दछौ
यो पनि पढ्नु होस ! अहिले पछिल्लो समयका एकदमै चर्चीत पत्रकार, युटुबर, तथा समाजसेवी सन्तोश देउजाको जीवन निकै नै अनौठो तथा दु:खदायी रहेको छ । सानै देखी निकै नै मेधावी छात्रमा गनिएका सन्तोश कक्षामासधै प्रथम हुन्थे । वास्तवमा भन्ने हो भने उनले पढेको सायद घर परिवारका सदस्यले समेत थाहा पाउदैनथे प्रा’यागरि सन्तो श घरका सबै सदस्य सुतेको बेला पढ्ने गर्थे। सानैदेखी च’तुर्याइ स्वभावका सन्तोष दिनभरि बाहिर साथीहरुलाइ क्र्याम्बोर्डमा भुल्याउथे अनि आफुचाहि रातभरि पढ्थे ।
सन्तोशका बुबा नेपाल प्रहरिको अवकासप्राप्त ब्यक्ति थिए । नेपाल प्र’हरिको अवकाश पस्चात सन्तोशका बुबा छोरा छोरीको भविश्यको लागी वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए भने उनकी आमा घरायसी काममै ब्यस्त रहन्थिन जब सन्तोश कक्षामा भर्खर मात्र कक्षा ८ मा प्र’वेश गरेका थिए तव उनको किड्नीमा स्टोन भयो । अर्थात उनको किड्नि मा ४२ ओटा स्टोन भयो । त्यसपछि उनको अ’प्रेसन भयो । त्यसबेलाको समयमा लगभग उनी छ महिना सम्म स्कुल जान पाएनन । जतिबेला उनी अस्पतालको बेडामा अफ्नै जीवनसङ्ग सङघर्स गरिरहेका थिए ।
उनी अस्पतालको बेडमा अनेक कुरा खेलाउदै उनेले अन्त्त आफ्नो मनलाइ आफैले सम्हाले । उनको किड्नि दुइपटक सम्म अ,प्रे,सन गर्नुपर्यो । अतः त्यस दिनदेखि उनी अहिले सम्म उनी त्यही ड्या’मेज भएको कि’ड्नि लिएर बा’चिरहे का छन । पर्सा घर भएका सन्तोषका बाबुअमा गाउँतिरै छ्न । झण्डै १२ वर्ष लभन्दा लामो पत्रकारिता पेशामा लागे का उनी लामो समयपछि मात्र घर जान पाउँछन् । अब प्रस्तुत छ भिडियो सामाग्री :हाइलाइट न्युज
Prevआयो प्रचण्डलाई ज्यान मा, र्ने ध, म्की ! यीनै हुन ध, म्की दिने ..(हेर्नुस पूरा भिडियो)
Nextबहिनी’ला’ई मृ’ त्यु’को मुख’वाट जोगा’उने ६ वर्ष’का यि बा’लक बने विश्व च्या’म्पियन हेर्नु’होस् भिडियो सहित।
भर्खरै नेपालकाे पूर्वी भेगमा भुकम्पकाे धक्का